HomeDUNIDAAasiya966 Sacuudi CarabiyaDabka Goobta Tareenka Jeddah
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 966 Sacuudi Carabiya, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, VIDEO 0
Dabka Goobta Tareenka
Dab ayaa ka kacay xarunta tareenka ee magaalada Jeddah, Sacuudi Carabiya.
Dab ayaa ka kacay xarunta tareenka xawaaraha dheereeya ee Haramain ee Jeddah, Saudi Arabia. Bayaan ay soo saareen difaaca shacabka ayay shanta qof ku dhaawacmeen laakiin aan lagu dilin dabka.
Muuqaalo laga daawado warbaahinta bulshada, qiiq madow iyo helikobtarrada ka duulaya goobta xarunta tareenka ee Haramain ee Jeddah ayaa la arkay. Fiidiyowyada khadka tooska ah ee fiidiyowga ayaa sidoo kale muujinaya in ay jiraan kumannaan dad ah saqafka dhismaha.
Xariiqa tareenka xawaare sare leh ee Haramain, oo qiimahoodu yahay EUR 6,7 bilyan (7,3 bilyan), ayaa la furay Sebtember. Khadka muslimiintu waa inuu ku xiraa magaalooyinka xurmada leh ee Maka iyo Madiina magaalada Jeddah adoo raacaya tareenada korantada ee safraya 2018 kiiloomitir saacadiiba (300 mayl saacaddii), oo leh awood sanadle ah oo rakaab ah 186 milyan.
Dab weyn ayaa ku fiday saqafka sare ee xawaaraha sare ee Al-Haramain #Jeddah, #SaudiArabia
Dabdemiska dabka ayaa ku shaqeynaya awood buuxda oo ay wax kaga qabtaan xaaladda.
Wax dhaawac ah lama soo sheegin. https://t.co/jbbwvQLomk
Saldhigga Tareenka ee Yolcati 09 / 06 / 2017 Yolçatı Railway Station Korkutan Dabka: Elazığ -Malatya ee waddada weyn ee waddada tareenka waddada tareenka waddada ee Rail Railway Roadcat Station ayaa ka dhacay. Sida laga soo xigtay xogta laga helay June 6 dhismaha bakhaarada idaacadda sababo aan la sheegin ee ka soo baxay guddi koronto ayaa burburay. Dabkii dhismaha bakhaarada ee saldhigga ayaa si dhaqsi ah u kordhay wuxuuna ku faafay qoob-ka-shaqeeyayaasha shaqaalaha. Shaqaalaha TCDD oo ka socda ciidanka dabdamiska ee ka socda saldhiga Yolcati ee saldhigga idaacadda sida ugu dhakhsaha badan ee suurta galka ah u demisay dabka. Haddii ay dhacdo dab kaco dil ama dhaawac ah inta baaritaanka la bilaabay. Waxaa laga soo xigtay: www.elazigsonhaber.com
Dab ka kacay saldhigga Ramses ee Saldhigga Qaahira ee Qaahira ... Ugu yaraan 25 Dhimasho! 27 / 02 / 2019 Tareen tareen ah oo ku yaal caasimadda tareenka ee Ramses ee caasimadda Masar, ee Qaahira, ayaa ku dhufatay meelihii la xidhay iyadoo si degdeg ah u dhaqaaqday. Shilkan kadib, ugu yaraan 25 dad ayaa la dilay, dadka 50 dhaawacmay. Sida laga soo xigtey ilaha maxaliga ah, dadka 25 ayaa la dilay waxaana dadka 50 ay ku dhaawacmeen dabkii iyo qaraxii. Ilaha rasmiga ah ee tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaan weli imaan. Xarunta tareenka Ramses ayaa la xidhay halka ay ambalaanska iyo dab-demiyeyaasha gobolka u direen. Waxaa la sheegay in dadku ay la kulmaan sumowga carbon monoxide sababtoo ah ma bixi karaan saldhigga. Ilaha ammaanka ayaa sheegay in aysan jirin wax calaamad u ah in shilku uu ahaa mid lid ku ah, halka Wasiirka Gaadiidku uu sheegay in tareenka
Jeddah si ay ugu xirmaan gobollo kale oo leh tareen cusub 27 / 10 / 2014 Jeddah oo ku xiran gobollada kale ee leh khadadka cusub ee tareenka: Magaalada Jeddah ee Sacuudiga ee ku xiran gobolka Jazan, 660 kilomitir xad dhaaf ah oo qadka tareenka ah ayaa la ansixiyay. Mashruuc uu qaban doono Ururka Tareenada Sacuudiga ayaa la rajeynayaa in uu xoojiyo xiriirka dhaqaale, ganacsiga iyo bulshada ee labada gobol. Sida laga soo xigtay warbixinnada warbaahinta maxaliga ah, heshiis ayaa la saxiixay shirkad injineernimo ah ee daraasadda daraasadda. Mas'uuliyiinta, qiimaha mashruuca, Awoodda rakaabka iyo mugga xamuulka daraasadda ayaa sheegay in xogta la isku halleyn karo la gaari doono. Waxaa la ogaaday in wajiga koowaad ee daraasadda la dhammeeyey. Khadka tareenka cusub wuxuu sii wadi doonaa xeebaha caalamiga ah waxaana uu gaari doonaa magaalada Cezan Economic.
Jidde-Mecca-Medina ayaa bilowday tijaabada tareenka xawaaraha sare leh 27 / 01 / 2017 Jidde-Medina Dareemayaasha Tareenka Xawaaraha Dheer ee Dheeriga ah ayaa bilaabmay: Jeddah - Mecca - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Dheerka ah ee Madaarka ayaa bilowday dhismaha baaritaanka wuxuu bilaabay 2013. Tareenka, oo kor u qaadi kara 330 km saacaddii, ayaa loo isticmaali doonaa in lagu yareeyo taraafikada inta lagu jiro xilliga xajka. Gudoomiyaha 2013, Madaxa Ururka Suxufiyiinta Sacuudiga. Xubnaha Cubara 4 ayaa ku dhawaaqay mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Jeddah-Mecca-Medina, kaas oo socon doona muddo sannad ah oo ay ku baxayso 8 bilyan oo doolar. Mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Harameyn waxaa la siiyay shirkad Sacuudi-Isbaanish Al-Shalya ah kadib markuu hindisey. Jeddah - Mecca - Madiina oo u dhexeeya rakaab rakaab ah 160, kaas oo qaadaya xawaaraha sare ee tareenka ee 450 km ke
Dhismaha Xarumaha Dhismaha ee Xarumaha Dhismaha Xarunta Xawaaraha Sare Jeddah 18 / 06 / 2019 Mashruuca Haramain High-Speed ​​Train Project (HHR), oo ka mid ah maalgashiyada ugu muhiimsan ee tareennada ee ay qaadeen Dawladda Sacudi Carabiya, ayaa la qorsheeyey inuu u adeego adduunka Islaamka iyadoo loo fududeynayo safarrada xajka, martida Ummadda iyo muwaadiniinta Sucuudiga. Waa mashruuc tareen oo xawaare sare leh oo isku xira labada magaalo ee Sacuudiinka iyo Madiina oo leh xarun jidka tareenka 450 oo leh saldhigyo (Makka, Jeddah, KAEC, Madiina). Dhismaha Xarunta ayaa dhisey Mashruuca Dhismaha Medina oo ka kooban mashaariicda Haramain High Speed ​​Train Project isla markaana si dhamaystiran u dhammeystirtay sida ugu dhakhsaha badan ee afarta saldhig. Maaddaama ay ku guuleeysteen guulaha ay ka gaareen Xarunta Madiina, dhismaha Xaruntu waxay dhamaystirtay hawlaha
Khariiddada Konya Tram, Konya Tram Saacadaha, Magaca Saldhigyada iyo Jadwalka Qiimaha
Dab ka kacay saldhigga Ramses ee Saldhigga Qaahira ee Qaahira ... Ugu yaraan 25 Dhimasho!
Jeddah si ay ugu xirmaan gobollo kale oo leh tareen cusub
Ogeysiiska Qandaraaska: Nidaamka digniinta dabka iyo nidaamka digniinta digniinta ayaa lagu rakibayaa ilaalinta dabka ee dhismayaasha
Ogeysiiska Qandaraaska: Dejinta dabka iyo nidaamka deminta dabka (Sirkeci Marmaray Loko Agaasinka Kormeerka)
Ilaalinta Dababka iyo Amniga ee Tunnels 2014 - Shirka Ka-hortagga Dab-demiska
Soo bandhigida hindisada: ANKARAY Dib-u-dhiska dab damiska iyo tuubooyinka dabka ee loo isticmaalo bakhaarka iyo saldhigyada
Ogeysiis Qandaraasle ah: Dib-u-hagaajinta goobaha dabka iyo tuubooyinka dabka ee ANKARAY